'भ्यालेन्टाइनः' तपाइँलार्इ परिवारको डरले टाढा जाने समय छैन् ? नजिकै यी ठाउँहरूमा 'डेट' जानुस | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more 'भ्यालेन्टाइनः' तपाइँलार्इ परिवारको डरले टाढा जाने समय छैन् ? नजिकै यी ठाउँहरूमा 'डेट' जानुस
‘भ्यालेन्टाइनः’ तपाइँलार्इ परिवारको डरले टाढा जाने समय छैन् ? नजिकै यी ठाउँहरूमा ‘डेट’ जानुस
माघ २६ गते, २०७४ - १०:३९
एक सातासम्म मनाइने भ्यालेन्टाइन डे फेब्रुअरी १४ मा पर्छ । अाफ्नो प्रेमिकासँग डेटिङ रमाइलो गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । कतपय कता गएर घुम्ने भन्ने अन्याैलमा परेका हुनसक्छन् । धेरै टाढा जान नसक्ने अबस्थामा थुप्रै जोडीहरू हुन्छन् । कतिपय नजिकैको रमाइलो वातावरणका ठाउँहरूको खोजीमा पनि हुन्छन् । कतिपयलार्इ टाढा जान परिवारको डर पनि हुन्छ । राजधानी नजिकै यस्ता थुप्रै ठाउँ छन्, जहाँ बसेर मज्जा लुट्न सकिनेछ । त्यस्तै हाम्रै वरिपरि पनि त्यस्ता रमणीय ठाउँहरु छन् जहाँ रमाइलो गर्नुको मज्जा छुट्टै छ। समय थोरै र कम बजेटले धेरै आनन्द लिने ठाउँहरु प्रशस्त पाइन्छ ।
सिन्धुपाल्चोकको भोटेचौरमा रहेको चियाबगानले जो कोहिलाई पनि चाडै आकर्षित गर्छ । ‘मिनी इलाम’ को रुपमा चिनिने भोटेचौर काठमाडौंबाट नजिक पनि रहेको छ । कुनै बिशेष दिनमा मात्रै होईन भोटेचौरमा जहिले पनि घुम्न र रमाईलो गर्न जानेको संख्या बढ्दो छ । काठमाण्डौंको चावहिलबाट करिब ३५ किलोमिटरको दुरीमा रहेको भोटेचौर प्राकृतिक सुन्दरताले जति भरिपूर्ण छ त्यति नै रोन्मान्टिक पनि छ । भौटेचौरबाट जुगल हिमश्रृखलाले जिस्काइरहँदा जो कोहि मन छुट्टै आनन्द आइरहेको हुन्छ । जहाँ चियाबगानको जोडि लुकामारी खेल्दा र ट्राउट माच्छाको स्वादले एक पटक गएपछि दोहो¥याएर जान कोहि पनि हिच्किच्याउँदैनन् । राजधानीबाट नजिक रहेको भोटेचौर घुम्नका लागि उपयुक्त ठाउँ हो । जहाँ सुविधायुक्त होटलहरु पनि छन् । सोहि दिन फर्कने हो भनेपनि नजिक रहेको छ ।
स्थापनाको छोटो समयमै ख्याति कमाएको ठाउँ हो चन्द्रागिरी । काठमाण्डौंबाट नजिक रहेको चन्द्रागिरी घुम्नको लागि प्रख्यात गन्तव्य हो । यहाँ गएर केबलकार चढेर छुट्टै आनन्द लिन पाइन्छ । यहाँ भालेश्वर महादेव मन्दिर पनि छ । मन्दिर गएर जोडिहरु पुजा गरेर वाचा/कसम पनि खाने गरेका छन् । प्राकृतिक सौन्दर्यता, ऐतिहासिक र त्यहाँबाट देखिने काठममाडौं उपत्यका तथा चित्लाङ गाउँको मनोरम दृश्यावलकेन गर्न सकिन्छ । रमणीय वातावरण भएकाले पछिल्लो समय थुप्रै मानिसहरु चन्द्रागिरी जाने गरेका छन् ।
सातदोबाटोबाट बस चढेको १० किलोमिटरपछि पुगिन्छ ललितपुरको गोदावरी । काठमाण्डौंबाट नजिक भएर पनि होला जहाँ भ्यालेन्टाइनको दिन जत्तिकै अरुपछि पनि भिडभाड हुन्छ । पिकनिकको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ हो गोदावरी । घुम्नका लागि रमणीय ठाउँ छ ।
कुनै नौलो ठाउँ होईन् सुन्दरीजल । शिवपुरी–नागार्जुन निकुन्ज क्षेत्रको जंगलको बिचमा छ । जहाँको खोल्साबाट बगेको पानी छ्याप्दै आफ्नो भरपुर मनोरन्जन गर्न सकिन्छ । ५० रुपैंया शुल्क तिरेर टिकट लिएपछि सुन्दरीजलमा दिनभर प्रेमिल आनन्द लिएर बस्न पाइन्छ । काठमाडौं बसपार्कबाट १६ किलोमिटर बसमा गएपछि सुन्दरीजल पुगिन्छ ।
काठमाडौंको माछापोखरीबाट बस चढेर २० किलोमिटर यात्रा गरेपछि नुवाकोट जिल्लाको ककनी पुगिन्छ । जहाँ पुगेपछि हरियालीको सौन्र्दयताले भरपुर मनोरन्जन लिन सकिन्छ । जहाँको प्राकृतिक सुन्दरताकै कारण रमाइलो गर्न जानेहरु छन् ककनीमा । त्यहाँ स्टेबरी र ट्राउट माछाको स्वादले खुब मनोरनजन लिन पाइन्छ ।
काठमाण्डौं ठमेल जति चर्चित छ, त्यहाँभित्रको स्वप्न बगैंचा पनि त्यत्तिकै चर्चित छ । उपत्यका भित्रको चर्चित ठाउँ मध्ये एक हो स्वप्न बगैंचा । जहाँ कुनै पर्वको अबसरमा जमघट हुने ठाउँ हो । नयाँ बर्ष, भ्यालेन्टाइन, क्रिसमस जस्ता दिनहरु प्रेमिल जोडिहरुको लागि सुविधासम्पन्न पार्क छ गार्डेन अफ ड्रिम अर्थात स्वप्न बगैंचा । माछा पोखरी, बगैंचा र क्याफे रहेको बगैंचा केशरमहलसँगै छ । स्वदेशीहरुको लागि मात्रै होईन् विदेशीहरुको लागि पनि रोजाईको डेटिङ स्पट हो ।
त्यस्तै घुम्नका लागि अर्को रमणीय ठाउँ हो चिसापानी । जहाँ लाङटाङ र गौरिशंकर हिमालको दृश्यावलोकन पनि गर्न सकिन्छ । सिन्धुपाल्चोक, काठमाण्डौं र नुवाकोटको संगमस्थल पनि हो चिसापानी । घना जंगलमा लुकामारी खेल्दै रमाउनुको मज्जा बेग्लै छ । शिवपुरी निकुञ्जमा टिकट काटेर जंगल र केहि बस्तीहरु नियाल्दै पुग्न पनि सकिन्छ चिसापनी । हाइकिङको लागि पनि उपयुक्त ठाउँ हो ।
काठमाण्डौं उपत्यकाभित्र पर्ने सदर चिडियाखाना पनि घुम्नका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो । ललितपुर जिल्लामा पर्ने उक्त चिडियाखानाभित्र जान भने विहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेभित्र मात्रै पाइन्छ । जहाँ जनावर तथा पंक्षीको अवलोकन मात्र होइन डेटिङका लागि सदर चिडियाखाना धेरैको रोजाईमा पर्छ । शितल र रमणीय स्थल मध्येको एक हो चिडियाखाना ।
सेतो गुम्बा अर्थात ह्वाइट गुम्बा पनि अहिलेको युवापुस्ताको लागि रोजाईको गन्तव्य पर्छ । त्यहाँबाट काठमाण्डौं उपत्यकाको रमणीय ठाउँहरु हेर्न सकिन्छ । शान्त र रमणीय वातारण रहेको ह्वाइट गुम्बामा सवारी साधन मध्ये मोटरसाइकल मात्र पुग्छ । कुनै पर्वहरुमा पैदल हिडेर जोडिहरु रमाइलो गर्दै जाने गरेका छन् । सितापाइलाबाट करिब डेढ घण्टा हिडेपछि ह्वाइट गुम्बा पुगिन्छ । पछिल्लो समय जोडिहरुको लागि रोजाईको गन्तव्य हो ।
चोभार नाम सुन्ने वित्तिकै चलचित्र र म्युजिक भिडियोको लागि चर्चित गन्तव्य भन्ने बुझिन्छ । रमणीय र हिमालको दृश्यावलोकनको हिसाबले पनि रमाइलो भएकाले पनि सुटिङ र घुम्नका लागि उपयुक्त गन्तव्य हो । पछिल्लो समय कुनै विशेष दिन वा पर्वको बेलामा मात्रै नभई चोभारमा बाह्रै महिना घुम्न जानेहरुको जमात ठूलै छ । बल्खुबाट करिब साढे चार किलोमिटर यात्रामा चोभार पुगिन्छ । प्रेमिल जोडिहरुको लागि त्यहाँ रमाइलो थुप्रै ठाउँहरु छन् ।
भ्यालेन्टाइन श्रृखला-१ पनि पढ्नुहोस्
माघ २६ गते, २०७४ - १०:३९ मा प्रकाशित